काठमाडौँ । सरकारले पूँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीकर्तालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक …
काठमाडौँ । महिन्द्रा समूहको एक हिस्सा महिन्द्राको फार्म इक्विपमेन्ट सेक्टर (एफईएस) ले आफ्नो सबै नयाँ ‘एसपीप्लस’ ट्रयाक्टर श्रृंखला नेपालमा सुरुवात गरेको छ । यी ट्रयाक्टरहरू महिन्द्राको उन्नत ईएलएस …
बलेफी हाइड्रोको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, भोलिदेखि कारोबार हुने, ओपन रेञ्ज कति ?
काठमाडौँ । बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको १ करोड ८२ लाख ७९ हजार ७ सय कित्ता आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावितहरुकालाई वितरण गरेको १८ लाख २७ हजार ९ सय ९० कित्ता, सर्वसाधारणहरुका …
२८ लाख ६५ हजार कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, बोनस र हकप्रद कति ?
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा २८ लाख ६५ हजार ९ सय १९.३९५९ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । दुई कम्पनीको बोनस शेयर र एक कम्पनीको हकप्रद शेयर आज सूचीकृत भएको हो । यसैक्रममा सेन्ट्रल फाइन…
विद्यार्थी संगठनहरुलाई आपूर्तिमन्त्रीको जवाफ– निगम घाटामा छ, इन्धनको मूल्य घटाउन सकिन्न
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्तरुपमा …
नेप्सेमा सुधार देखिंदा कारोबार रकम भने घट्यो
काठमाडौँ । लगातार घटिरहेको शेयर बजारमा आज सुधार देखिएको छ । नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) का अनुसार आज बजार १६.३२ अंकले बढेको हो । …
कोरियाको एक संस्थाले विद्युत प्राधिकरणलाई हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न सघाउने
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको एक संस्थाले नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन गर्ने बताएको छ । उसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर यस्तो इन्धन उत्पादनको कुरा गरेको हो । दक्षिण कोरियाको ग्…
सुनचाँदीको मूल्य तीनदिन देखि स्थिर, कति रुपियाँमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ । मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य स्थिर छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार, तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार पाँच सय रुपियाँ तोकिएको छ । साता…
काठमाडौँ । रिभर फल्स पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको साधारण शेयर बाँडफाँट गरेको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा आज प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन …